अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा ! – Hindu Cultural Center
Home Event Calendar अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा !
– शिव नेपाल
भारतीय मन्दिरहरुले विश्वभर देशान्तार्युक्त पंचांग दशकौं वर्षदेखि लागू गर्दा पनि नेपालीहरु अझै यस विषयमा बिबाद र बखेडामा पर्नु सान्दर्भिक देखिएन । समयमै नेपाली समाजमा उचित प्रचारप्रसार गर्न नसकिएकोले लोकमा पर्न गएको भ्रम सम्बन्धमा नेपाल पंचाग समिति र अन्तर्राष्ट्रिय पंचांग समितिले आत्म-आलोचना गरेर पूर्ण समन्वय गरी अगि बढ्नु पर्ने पूर्ण आवश्यकता देखा परेको छ । हुन त धर्म निरपेक्ष संबिधान र सरकारको कारण आवश्यक अधिकार र श्रोत नहुनु मुख्य दोष हो भनेर बुझ्नेले बुझेका छन् । तर नबुझ्ने र श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने मनस्थिति बोकेकाहरुले भने सनातन बिरोधी प्रयास भनेर खुलेर बिरोध गरी समाजलाई दिग्भ्रमित पुर्याउने कु-चेष्टा गरेको पनि पाइयो ।
जाबो २-३ कक्षाका विद्यार्थीले पढ्ने भूगोल र तिथि उदय र अस्त , सुर्योदय र अस्त पनि बुज्ने चेष्टा नै गर्दैन मान्छे । सुन्न र बुझ्न खोज्दैन भने – गोष्ठी र सभा गरेर बुझाउन भन्दा चाँडो भन्दा चाँडो पंचांग प्रकाशन गर्ने र पात्रो बाहिर पृष्ठमा अनिबार्य रुपले कहाँको लागि हो लेख्नु पर्ने कुरा गर्यो भने यो धर्मको लडाइ जितिन्छ ।
उदेक लाग्दो कुरा त के हो भने मै हुँ भन्ने पण्डित र धर्मशास्त्रीहरुले समेत बुझ्न सकेनन् वा खोजेनन् र यजमान जता धेरै छन् त्यतै बोले ।
नेपाल पंचांग समिति र अन्तर्राष्ट्रिय पंचांग समितिले आवश्यक परे विश्व हिन्दु परिषद र अरु धार्मिक संगठनको मिलेमतोमा साङ्गठनिक तबरले चांडो भन्दा चांडो यो बिषय टुङ्ग्याउनु राम्रो होला । हुन त विभिन्न बिचार निस्केलान् , त्यो खासै महत्वपुर्ण नहोला ।
हुन त यो बिषयलाई लिएर बिना ज्ञानको आधारमा धमिलो पानीमा आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र अरुलाई हिलो छ्यापेर आफु अघि बढ्ने प्रबृत्ति पनि देखा परिसक्यो । public psychology मा भनेको कुरा ठ्याक्कै मिल्यो, “बहुमत भन्ने जन्तु अर्कै हुन्छ, जस्को आँखा र कान अर्कैले खोलिदिनु पर्छ ।”
धेरै सामान्य कुरा :
अहोरात्र ( २४ घण्टा ) अहो ( दिन ) रात्र ( अँध्यारो) भनेको सूर्यको गतिले मात्र दिएको कुरा हो, चन्द्र गतिले दिएको कुरा हैन । तिथिको दिन र रात हुँदैन, यो लागे पछि संसार भर एकै पटक लाग्छ एकै चोटी छोड्छ । मान्छे नबुझेर झुक्कियो ।
अमेरिका र नेपालमा एकै समयमा तिथि लागू हुन्छ तर दिन र रातले गर्दा मान्ने बेला मात्रै फरक परेको हो भनेर बुझाउन खोज्दा बुझ्दैन भने अलि बिस्तृत तलका कुराहरु बुझाउन जनमानसलाई निकै गाह्रो छ ।
समाजको लागि अलि जटिल प्रश्न:
तिथि किन घट बढ हुन्छ ?
किन अधिक मास र क्षयमास हुन्छ ?
किन नेपालमा ग्रहण लाग्दा अमेरिकामा लग्दैन ?
अर्को कुरा हरेकको न्वारानको नाम चु चे चो ला ( अस्विनी) करिब ६/८ घन्टाको मात्रै हुन्छ ( एक नक्षत्रबराबर, करिब २०/३० घडि ) ।
जन्म लग्न जम्मा २ अढाई घन्टाको हुन्छ। १०-१२ घन्टामा धेरै फरक पर्छ ।
यस्ता कुरा बुझ्नका लागि सामान्य ज्ञान हुनु पर्दछ ।
यस्ता कुराहरु बुझाउन लाग्दा बुझाउने मान्छे नै थाक्छ । त्यसैले पन्चान्ग सकेसम्म चाँडै निकाल्ने र राम्रोसंग देखिने गरी कहाँको लागि हो भनेर प्रष्टसँग लेखिदिने जथाभाबी प्रकाशन गर्न नपाउने बनाउने हो भने यो समस्या धेरै सजिलोसँग पूरा गर्न सकिन्छ । धेरै गलफत्ती गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो ठम्याई एउटा ज्योतिष धर्मशास्त्र तथा Modern Science and Engineering को विद्यार्थी र IBM जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा बसेर Information Technology तथा ब्यबस्थापनमा करिब २ दशक भन्दा लामो काम गरेको अनुभवको आधारमा व्यक्तिगत रुपमा मैले यो विचार बाँड्दा समाजको लागि राम्रो होलाकि भनेर मेरो भनाइ राख्ने प्रयास गरेको हुँ ।
शिव नेपाल हाल : फेयरफ्याक्स, भर्जिनिया, अमेरिका)